Gasthof Zum Wirt / iholide yokuhlala Hohenbogenblick (Neukirchen b. Hl. Blut), indlu yeeholide yabantu abayi-4 abanebalcony
UClaudia unezimvo eziyi-115 zezinye iindawo.
Apartment 4 abantu nge balcony
Indlu esandula ukulungiswa yabantu aba-4 abanebalcony, imbono esecaleni yeNeukirchen kunye neHohenbogen, enekhitshi, ibhedi etofotofo, amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo.
Iiflethi ezinombono omangalisayo weHohenbogen kunye neFreibachtal. Onke amagumbi eholide ane-balcony okanye i-terrace, umnxeba, iTV yesathelayithi kunye neWiFi yasimahla. Ngesicelo, isidlo sangokuhlwa kwisitayela sasekhaya kwindlu yokulala sinokwenzeka! Igumbi lokudlala elikhulu kunye nebala lokudlala labantwana. Iindawo zokupaka zangaphakathi okanye ii-carports ziyafumaneka kwiindwendwe zethu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Neukirchen beim Heiligen Blut